Ukuhanjiswa kweetafile ezisi-7 ", 8", 9 ", 10" i-intshi, zingaphi ngeesentimitha (ubude, ububanzi)? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ukuhanjiswa kweetafile 7 ", 8", 9 ", 10" intshi, zingaphi nge-cm (ukuphakama, ububanzi)?
Ubungakanani beDiagonal, nakwiiTV.
I-intshi enye-1 cm.
Ii-intshi ezi-8 cm.
Ii-intshi ezili-9 - 22,86cm
Ii-intshi ezili-10 - 25,4cm
Ngophuhliso lwetekhnoloji, iitafile ziya zithandwa kakhulu, ezingakwazi kuphela ukuzalisa inxenye imisebenzi yekhompyuter, kodwa zisebenze njengeTV, i-e-book, njl.
Okwesibini, emva kwexabiso, esikuqwalaselayo xa uthenga ubungakanani kunye nobunzima bemveliso.
Kukho imigangatho ethile engqingqwa ehambelana nobungakanani obuthile kwi-intshi yethebhulethi. Ngalesiilinganiselo (i-intshi ukuya kwiimilimitha), ndicebisa ukuba ufunde ngezantsi.
Nditsalela ingqalelo yakho ekubeni le kuphela kwesikrini ngokwayo, kunye nethebhulethi inesakhelo esimnyama, ekunokuthi, ngokungathi singenanto, sizaliswe nangamaqhosha olawulo, nawo ekufuneka ethathelwe ingqalelo.
Ukwenza lula, kunqweneleka ukukhangela ubukhulu becwecwe lethebhulethi ethile kwiimpawu zayo.
Kwi-intshi ezi-2,54 zeesentimitha. Ke unokubala nayiphi na i-diagonal yayo nayiphi na ithebhulethi.
Ungasebenzisa itafile ukumisela ubude nokuphakama komboniso.
Kodwa okungaphezulu akusoloko kuyinto ehamba phambili.
Ithebhulethi nganye ineengenelo kunye nezinto ezingalunganga.
Molo. Ndibonisa kuwe itafile apho kuboniswa khona i-diagonal eyi-intshi nge-intshi, ngokuguqula ukuya kwisentimitha. Itheyibhile ikwabonisa ububanzi kunye nokuphakama komboniso kwi-intshi, kubalwa nge-cm, ngokuxhomekeka kwi-diagonal yesikrini
Ukuguqula i-diagonals ezibonisiweyo kwii-intshi ukuya kwisentimitha, kufuneka wazi ukuba i-intshi enye ngu-2.54 cm cm. Ke ngoko, sifumana ezi ziphumo zilandelayo, ekulula kakhulu ukubala:
I-17.78 cm ngama-intshi ayi-7;
I-20.32 cm ngama-intshi ayi-8;
I-22.86 cm - 9 inches;
kwaye i-25.4 cm-ngokulandelelana, ii-intshi ezili-10.
Yonke into ilula kakhulu, kufuneka usebenzise le tafile:
Ibonisa ubungakanani bedigonal, kunye nokuba zeziphi izibonisi ezinokubakho nokuphakama nobubanzi, kuba ezinye izikhundla ziyimizekelo yezixhobo ezinje.
Isikrini sethebhulethi silinganiswa ngokobunzima kwiimilimitha.
Ukufumanisa ukuba zingaphi iisentimitha ezi, kufuneka wazi ukuba zingaphi iisentimitha ezi-intshi enye.
Ke, kwi-intshi enye ngu-2,54 cm.
kwii-intshi ezisixhenxe zivelisa i-17,78cm.
kwii-intshi ezisibhozo ujika ube ngu-20,32 cm.
ii-intshi ezilithoba zijika zibe ngama-22,86cm
ii-intshi ezilishumi zi-25,4 cm.
Kwinkqubo yemetric, ii-intshi ezihambelana nesentimitha, umyinge ulolu hlobo lulandelayo: 1-intshi = 2,54 cm. Ukufumana ubungakanani be-screen ye-diagonal yepilisi okanye ikhompyuter echazwe ngumenzi okanye umthengisi nge-intshi, siphinda nje ukuphindaphinda isibonisi samanani ngo-2,54.
I-diagonal ye-intshi ezi-7 ziya kulingana nge-17 cm 78 mm.
I-diagonal yee-intshi ezi-8 ihambelana ne-20 cm 32 mm.
I-diagonal yee-intshi ezi-9 cm ngu-22 cm 86 mm.
I-diagonal yee-intshi ezili-10 cm ngu-25 cm.
Ukugcina iitafile zakho ezinkulu entlokweni yakho akuyimfuneko.
Kwanele ukukhumbula ukuba i-intshi enye = 1 cm.
Emva koko, phindaphinda i-2,54 nge-diagonal oyifunayo, unamathisele iirula kwiphepha le-diagonally kwaye ufumane ubungakanani besikrini esichanekileyo.
Ithebhulethi eyi-intshi ezi-7 ubukhulu kuphela zi-1,5-2 intshi ezinkulu kune-smartphone yanamhlanje, ukukhala kwithebhulethi kuyahlekisa, kungangcono ukubukela imovie kwi-smartphone eyi-5,5-intshi elungileyo.
I-intshi eziyi-10 sele isisiscrawbook net screen esemgangathweni. Ngala masayizi, ndifuna ngokwenene ukuguqula ithebhulethi ibe yincwadi ye-netbook, kwaye ... bayayithenga ikhibhodi.
Ke, ukuze ufumanise ukubonakaliswa kwamacwecwe kwisentimitha, kwaye hayi kwii-intshi eziqhelekileyo, ndiyakucebisa ukuba usebenzise le tafile ilandelayo xa uguqulela:
Kwaye ukuba akukho phawu sele lukhona, khumbula nje ukuba i-intshi enye yi-2,54 cm. Kwaye ukuguqula i-intshi ukuya kwiisentimitha, kufuneka nje ziphindaphindwe: i-diagonal kwii-intshi eziphindwe ngo-2,54.
Ewe, xa ujonga indawo ezikhetha ifowuni yakho kunzima ukufumanisa ubungakanani bokwenyani, kuba yonke into ibonisiwe kwi-intshi. Nantsi itheyibhile yokubala apho ii-intshi ezibonisiweyo zibonisiwe:
I-intshi enye malunga ne-1 cm.
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,291.